Koox taageerayaal boonbale ah soo saftay garoon kubadeed iyo fadeexad ka raacday - Calanka.com
Koox taageerayaal boonbale ah soo saftay garoon kubadeed iyo fadeexad ka raacday
Koox ka dhisan dalkaasi Kuuriyada Koonfureed oo lagu magacaabo FC Seoul ayaa ku ceebowday ciyaar ay la ciyaareysay naadiga Gwangju FC kadib markii ay garoonka soo saftay boonbale ay u ekeysiisay taageerayaal.
Sababo la xiriira cudurka coronavirus ayaa waxaa kooxda usuurogeli waayay in ay hesho taageerayaal ku filan, waxaana ay doorbiday in ay garoonku ku xardhido taageerayaal ka sameysay boonbale oo waliba dumar u badan.
Boonbalooyinka meesha lasoo safay ayaa waxaa ay tiradoodu dhameyd ilaa 30, 25 ka mid ahna waxa ay ahaayeen dumar.
Kooxda ayaa dhankeeda iska diiday eedeymaha loo jeediyay in ay baanbalooyin ku badsatay taageerayaasha, waxaana ay dhacdadaasi ku fasireen mid ay ugu sameynayeen xayeysiis shirkad sameysa boonbalooyinka.
Cudurka karoonvirus ee faraha ba`an ku haya caalamka ayaa saameyn weyn oo xag dhaqaale iyo mid taageerayaalba u geystay inta badan kooxaha kubadda ee ka dhisan caalamka, waxaana qaarkood ayba mushaarkii ka jarteen ciyaartooyda.